Shina tombo-kase crankshaft avo lenta avo lenta ho an'ny orinasan-tsolika TC 09283-32022 orinasa sy mpanamboatra | Xinchi
Xinchi SL kit feno kitapo SL01-99-100 mety amin'ny T3500 ...
Varotra mafana amin'ny kitapo maotera motera diesel 5-8 ...
WLAA-10-271B \_ WL51-10-271 ho an'ny lohan'ny motera WL ...
Fiaramanidina lohan'ny fiara ho an'ny Hiace Hilux 2KD Eng ...
280 pcs fisaka peratra Hydraulika Fittings napetraka isan-karazany Sol ...
Tombo-diloilo crankshaft avo lenta avo lenta ho an'ny tombo-kasen'ny TC 09283-32022
Ivelany: 47 mm
OE TSIA. 09283-32026 / 96051420/91120283/94535472 / 09283-32025 / 91120284 / 09283-32003 / 09283-32002 / 09283-320116 / 09283-32022 / 81-53236-00
Etsy ivelany: 47 mm Haavo: 8mm
ara-nofo Ny akorany metaly dia manampy fingotra voajanahary
Loko Mainty na volontany, na mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
Fepetra fandoavana T / T, firaisana tandrefana na raha ilaina
Ora nanomezana 5-10 andro amin'ny tahiry, 5-30 andro ho an'ny famokarana deatials ary hamaroana
Fampiharana Ho an'i MATIZ, KALOS, SUZUKI
Ny TC Oil Seal dia natao manokana hisorohana ny rano sy ny loto.
Ny savaivony mifono ivelany dia mamorona tombo-kase optimum amin'ny foibe.
Ny lohataona vy garter dia manome antoka ny tsindry tsy tapaka amin'ny vatan'ny axle amin'ny ain'ny tombo-kase.
Tsara amin'ny fanoloana ny tombo-kasen-diloilonao simba.
Izy io dia afaka misoroka ny vovoka sy ny loto ao anaty ny masinina, ary manakana ny famoahana menaka fanosorana.
Vita amin'ny fitaovana tsara kalitao miaraka amin'ny tombo-kase matanjaka.
Mampihena ny mari-pana miasa, ny akanjo ary ny fikorontanana.
Mahazaka havizanana ary mahazaka mitafy, hiantohana ny fizotran'ny moto.
Sakano tsara ny fandroahana solika ary hiambina ny loto sy ny hafa.
Fametrahana mora, tsy ilaina fanovana.
Ny tombo-kase matanjaka dia manome mpandeha fitsangatsanganana mahafinaritra.
Tombo-kase solika, fantatra koa amin'ny tombo-kase, dia tombo-kase molotra radial izay ampiasaina indrindra amin'ny fitazonana ny menaka manitra amin'ny fitaovana misy fihodinana, valiny na oscillating shafts. Ny fampiharana lozika mihodina dia mahazatra indrindra.
Ny tombo-kase misy menaka mazàna dia misy singa telo fototra: ny singa famehezana, ny vy ary ny lohataona. Ny tanjon'ny singa famehezana dia ny hampiatoana ny tsiranoka tsy hivoaka eo anelanelan'ny hazo sy ny trano. Ny trangam-by dia hanome henjana sy tanjaka ny tombo-kase raha mbola tazonina ao anaty lalan-drivotra na mihodina izy io. Ny lohataona garter dia miantoka ny tsindry tsy tapaka ary mitazona ny hery radial amin'ny zana-kazo, manaparitaka ny sisin'ny famehezana amin'ny sakany voafaritra. Ny lohataona garter dia mitazona ny hery radial ampiasain'ny molotra famehezana manodidina ny vatan'ny hazo. Ny fitaovana rehetra dia tsy maintsy safidiana arakaraka ny tontolo iainana hiasan'ny tombokase menaka.
Ny zava-bitan'ireo tombo-kase ireo dia miankina betsaka amin'ny enta-mavesatra azo raisina izay hitazonana ny interface segel-shaft. Ireo tombo-kase ireo dia mahazaka tsindry 15PSI ary ny fiasan'izy ireo dia miankina amin'ny masontsivana toy ny savaivon'ny hazo, ny hafainganam-pandehan'ny hazo, ny hafanan'ny miasa, ny toetran'ny serivisy sns.
Teo aloha: Varotra amidy indrindra AH8846G, 8-94235-369-0 4JA1 4B1 tombo-kase crankshaft aoriana 95 x 118 x 10
Manaraka: Engine Code 2L 3L Auto Part Rock Valve Cover Gasket Ho an'ny Toyota HILUX 2.4 D 11213-54050
Fitaovana silika vaovao Gasket Oil Pan 83-91 ho an'ny ...
OEM 96353002 Valve Cover Gasket HO AN'NY 1999-2008 C ...
Vokatra amidy indrindra AH8846G, 8-94235-369-0 4,4 ...
Tombo-diloilo crankshaft avo lenta avo lenta ho ...
Xinchi SL Kit feno gasket SL01-99-100 mety amin'ny T ...
Varotra mafana amin'ny gasketan'ny motera diesel ...
Kitapo lohan'ny fiara ho an'ny Hiace Hilux 2K ...
280 pcs fisaka peratra hydraulic hydraulic Fittings Set Assorte ...